This is a clickbait - Page 2 - General - Somali Forum - Somalia Online
Woow, wakaa, weynakaa, war hadaa sheeko-rageed laysla jaanqaadayaa. Mar haddii waxgaradkii, Xiinfaniin, Nuune, Juxa, meesha soo kadaloobsateen (ama soo jilib-llabtaan geedka hoostiisa).
Markaa waxa ay u egtahay in hadda asal-hadal dhab ah, oo kaftan buuxa leh, xaragana ku dheehantahay, xeer-dabrana leh, in laysla heli doono.
Runtii, meesha, ciyaal farmaajo soo dirsayey oo "sheegatto" u badan. iyo mid hadalkiisa iyo doodiisu yahay wax "badh-rageed" hadalkiiis lagu tilmaami karo, iyo mid kaloo "Af-garanwaa" ah (oo Baydhaba kasoo ambadaey) ayaa meeshii isugu soo hadhay,
Taasina waxa ay keentay, in makhaayaddii nin-rageedku ku goolaaftami jireen ee ay ku kaftami jireen ay noqotay meel aan dhaamin "xero-foodleydu" ku yooyootanto.
Markaa, raggu hasoo dhawaadaan. Inta hadhayna, sida Norf, Jaceylbaro, Sophist (my old friend), Baashi iyo HornAfeique, iyakana war-lalis haloo diro.
Oo hala yidhaahdo geed-qudhaceedkii "hadhka-weynaa" ee SOL la-odhan jirey ee raggu isugu jjilbo-laaban jireen marka ay dood isugu goleysanayaan hoostiisa, waa labuuxaa, oo "gadh-castu" waa safan tahay oo waa dhantahay ee idin-na meesha iskeena.